Musharaxiinta madaxweynaha Galmudug Oo qaadacay doorashada -
HomeWararkaMusharaxiinta madaxweynaha Galmudug Oo qaadacay doorashada
January 22, 2020 F.G Wararka 0
Waxaa Soo Baxaya Warar Sheegaya in Afar musharrax oo muhiim ah, ay qaaddaceeyn doorashada madaxtinimada dowlad goboleedka Galmudug, kadib markii ay sheegeen in dowladda Federaalka Soomaaliya ay af-duubtay Hannaankii doorashada.
Waxaana ay kala yihiin
1:Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowaa,
2:Cabdullaahi Faarax Weheliye,
3:Kamaal Daahir Guutaale
4: Cabdi Dheere
dhammaantood Waxa ay u sharraxan yihiin xilka madaxweynaha Galmudug, waxaana ay si wadajir ah saqdii dhexe ee xalay uga shaaciyay go’aankaasi magaalada Dhuusamareeb.
Musharrixiintan ayaa guddoonka Baarlamanka Galmudug ku eedeeyay, in uu kala qeybiyay guddiga doorashada madaxtinimada maamulkaas, isla markaana uu hal dhinac la saftay, sidaasi darteedna aan lagu kalsoonaan Karin doorasho hal dhinac qabteen.
Musharrixiinta ayaa guddoonka Baarlamanka Galmudug ugu baaqay in uu dib u mideeyo xubnaha guddiga doorashada madaxtinimada Galmudug, si loogu kalsoonaado shaqada guddigaasi.
Madaxweynihii hore ee maamulka ayey sheegeen inuu Gaalkacyo ka wado dhismaha maamul dhinac socda kan Dhuusamareeb, Asigana inla qanciyana ay aheyd inta aan la qaban dorashada madaxweynaha, balse dhegaha laga fureystay, sida ay hadalka u dhigeen.
Ugu dambeyntii musharaxiintan ayaa sheegay in iyagoo tix galinaya arimahaas ay soo sheegeen ay qaateen go’aanada kala ah,
1-in aysan ka qeyb galin doorasho ay maamulayaan qeyb ka mid ah guddiga doorashada oo kala qeybsan, Jadwalka ay soo saareena uu yahay mid aan la aqbali karin.
2-iyo in guddoonka Baarlamaanku uu u howlgalo dib u mideynta guddiga doorashada, lana joojiyo in garab ka mid ah guddiga loo afduubo howlaha doorasho ee mamulka.
Dhankooda Ahlu-sunna ayaa shalay qaadacay doorashada madaxweynaha Galmudug, kadib markii ay dowladda Federaalka ku eedeeyeen, in ay afduubatay hawlihii guddiga doorashada.
Waxaana warqad ka soo baxday xaafiiska madaxa Xukuumadda Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan lagu sheegay inaysan qeyb ka aheyn hada kadib howlaha ka socda Dhuusamareeb, waxayna dowladda dhexe ay ku eedeeyeen inay afduubatay dhismihii maamulka Galmudug.